Su'aal: Waa maxay xoqxoqa caruurta lagu sameeyo?
Author Topic: Su'aal: Waa maxay xoqxoqa caruurta lagu sameeyo? (Read 1935 times)
« on: October 03, 2015, 08:50:46 AM »
Waa maxay xoqxoq iyo cusba caruureed?
Maxaa kajira ilmaha socodka ka daaho inuu ubahanyahay in laga xoqxoq dabada, ama lasiiyo cusub cusbadaso loyaqaano cusba caruureed?
Waxaa hesta ilmo da'dodu tahay labajir oo ka dahay socodkii marka dhaqatiir badan ugeeyay mid waliba waxuu idhahaa canugan neerfihiisa waa fiicanyihiin wax maqabo wuu socondonaa wejirtaa ilmaha qaar oo ka daha socodka, waxaa u yahay canug aad u cabsi badan marka waxaa ani isleyahay cabsidan ayaa u kenesa dahida dad badan ayaa igula taliya in ilmahan haayo xoqxoq ana waaka dhaga adeegaa oo diiday in lagu sameeyo sanca somaligaas maxaa talo isiinesan oo sameya?
Canugega wax garadkiisa, caqligiisa, fahanka marka aad wax usheegesid kuli waa normal wax dhib ah maka jiraan. Mahadsanidiin.
Re: Su'aal: Waa maxay xoqxoqa caruurta lagu sameeyo?
« Reply #1 on: October 05, 2015, 12:13:02 PM »
Cusbada aad tilmaantay waa cado dhaqameed aad asalka ku haynin caafimaadka, waxaan talo ku siin lahaa in aad dhakhtarka ra'yigiisa raacdid oo aad sugtid xililgii eebe ugu tala galay in cunugaaga uu socdo.
dhib ma hayo hadee gacmahaaga dhib haku raadsanin, haddii aad adiguba marqaati ka tahay in cunugaagu uu caafimaad qabo maxaa dadka warkooda u qaadanaysaa weliba adigoo la tashtay dhakhtar aqoon u leh xanuuanda caruurta!!
Views: 51766 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 52390 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 48161 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 33164 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 32347 January 22, 2019, 08:47:10 PM